Fiteny tsy fantatra
Tetiandro litorjikanny Fiangonana katolika siro-malabara
Zanadralambo amin Andrianjaka
Hasina (zavatra voatokana)
Isaaka zanaki Abrahama
Fitsanganani Jesoa ho velona
Toekaren ny Repoblikan i Kôngô
Kanônan ny Baiboly ôrtôdôksa teoahedo
Randrianantenaina Henintsoa Lamy Juno
Fanomezam-pahasoavana fitonny Fanahy Masina
Lisitr ireo mpanjaka merina
Bola (volana hebreo)
Etanima (volana hebreo)
Korinto taminny Andro Taloha
Filona avy any Aleksandria
Eo amin ny tantaran ny Kristianisma, ny hoe Fiangonana Lehibe dia ilazana ny fiangonan ny Kristiana any amin ny Jentilisa izay nihaniseho tamin ny taona 100 taor. J.K. Amin ny teny latina dia atao hoe Ecclesia Magna izany. Tokana tsy nizarazara n ...
Fielezanny fanajana ny Fo Masini Jesoa
Nanomboka tamin’ny taonjato faha 17 no niely ny fanajàna ny Fo Masin’i Jesoa tato amin’ny Eglizintsika. Anton’ny tena fielezany ny fisehoan’i Jesoa miaraka amin’ny fony masina tamina Masera iray antsoina hoe Marguerite-Marie Alacoque, tao amin’ny ...
Ny fiainana dia nofinofy dia asa fanaovana teatra ani Pedro Calderon de la Barca navoaka taminny 1635 ary anny haisoratra Baroque. Ny lohahevitra afovoany dia ny fahalalahanny zanakolombelona handamina ny fiainany, tsy ho entinny heverina ho laha ...
Charles Colbert du Terron Georges de Nassau-Dillenbourg Jean Le Pautre Henry Oldenburg Henry Bennet Gioseffo Danedi Peter Lely Guillaume Couture Jean Hamon médecin Abraham van den Kerckhoven Claude-Lamoral Ier de Ligne Michael Sweerts Nicolas Pot ...
Carlo Collicola Jean-Baptiste Morgagni Pierre-Joseph Thoulier dOlivet Carlo Vincenzo Maria Ferreri Thaon Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry Paul Hay du Chastelet marquis Nicolas-Antoine Coulon de Villiers Ignacio Visconti Bartholomew Roberts Mich ...
Filazantsara araka ani Lioka
Ny Filazantsara araka ani Lioka, na Vaovao Mahafaly araka ani Lioka, na Evanjely araka ani Masindahy Lioka dia fahatelo aminny Filazantsara na Evanjely ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Sahala aminny mpanoratra ny Vaovao Mahafaly ara ...
François de Bourbon 1519-1546 Innocent IX Kanō Shōei René de Chalon Edwin Sandys Henry FitzRoy 1er duc de Richmond et Somerset Catherine de Médicis Isabelle Jagellon Bernard Gilles Penot Bertrand dArgentré Henri II de France Andrea Cesalpino Mary ...
1935: Luis Suárez Miramontes - mpilalao baolina kitra 1947: James Dyson - mpamorona, mpiantoka 1859: Jerome K. Jerome - mpanoratra, Mpanao gazety, mpanoratra tantara tsangana, mpanoratra ny tantaranny fiainany, mpanoratra tantara lava 1941: Bob T ...
I Afrika Afovoany dia faritra ao Afrika ahitana ny tapany atsimon i Sahara sy ny tapany atsinanan ny ampinga andrefana afrikana ary ny lohasahan ny Hantsana Lehibe. Ireto avy ireo firenena sy tany voatanisa matetika ao Afrika Afovoany: i Angôla, ...
Ny rajako no fonenanny tany, rajako be ahavokatra izay monina ao aminny alani Afrika Atsimoni Sahara. Izy ireo no primatiora velona indrindra.
Ny Tandroki Afrika dia anarana iantsoana ny saikanosioni Afrika Atsinanana izay hita avy any aminny morontsiraka atsimonny Ranomasina Mena hatrany aminny morontsiraky ny Ranomasini Arabia, ka mandalo ny Helodranoni Adena sady miendri-tandroka rin ...
Ny hipopotama dia biby mampinono goavam-be, tsy dia misy ahitra ary maimaim-poana any Afrika atsimoni Sahara. Iray aminireo karazana roa sisa ao aminny fianakaviana Hippopotamidae izy io.
Ny toetanin-jana-pehin-tany dia karazana toetany hita eo anelanelan ny zana-pehin-tany roa hatramin ny fehin-tany faha-14 avaratra sy atsimo, izay manana sala-maripana isan-taona tsy latsaky ny 18 °C mandritra ny taona. Tokana ny fizaran-taona be ...
I Darfora dia faritra ao andrefani Sodàna, izay mivelatra ao amini Sahara sy i Sahely atsimoni Sahara. Silamo ny mponina ao. Ahitana oranioma sy varahina betsaka ny ao Darfora. Atao hoe دار فور / Dār al-Fūr, izay midika hoe "tranoni Fora" na "tan ...
Ny leoparda dia iray aminireo dimy ambiny ao anatinny kazara Panthera, mpikambana ao aminny Felidae. Mipetraka any aminny faritri Afrika atsimoni Sahara, any aminny faritra kely any andrefana sy Azia Afovoany, any aminny kontinanta Indiana any Az ...
Ny jirafa dia biby misy nono mandinika, lava vozona, miaina any amin ny fatrana misy hazo any Afrika atsimon i Sahara, izay farany avo indrindra amin ny biby miaina an-tanety. Atao hoe Giraffa camelopardalis ny anarany ara-tsiansa. Any Tsady hatr ...
Ny London Missionary Society, izay azo atao aminny teny malagasy hoe "Fikambanana Misioneranny Londra", dia fikambanana misionera kristiana tsy miankina aminny fiangonana, niorina tao Angletera taminny taona 1795. Kristiana protestanta no mikamba ...
Ny fanandevozana dia ny zava-manjo ny olona iray tsy manana fahafahana ka lasa fananana, azo trandrahaina sy azo amidy aminny olona iray hafa sahala aminny entam-barotra. Ny andevo, izay faritani Aristoty ho sahala aminny "fitaovana manana aina", ...
Ny toe-tany na toetany dia ny fitambaran’ ireo zava-mitranga momba ny toetrandro mampiavaka ny toerana na ny faritra iray, izay nosalaina mandritra ny ampolotaonany maro, ka isan’ izany ny sala-maripana farany ambany sy farany ambony, ny salan-ka ...
Ny Mozika dia zavakanto mandrindra ny feo arakaraky ny fotoana: ny ngadona dia tohanio fanakambanana io anatinny fotoana, ny haabom-peo, ny fanakambanana anatinny hatetika, sns. Anatinny tranga sasany. Ny Mozika dia zavakanto. Sady famoronana izy ...
Ny ejiptôlôjia na egiptôlôjia dia vondon-taranja ao aminny siansanny maha olona andinihana ani Ejipta taminny Andro Taloha, dia ireo misahana ny fiteny, ny literatiora, ny fivavahana, ny taotrano, ny zavakanto) izay mahafaoka ny vanim-potoanny fa ...
Ny teny hoe François dia avy aminny anarana hoe France izay nantsoina hoe Francie, izay avy aminny teny latina ambany frantsay: bas-latin Francia dikan-tsoratra AAI: izay nanome ny teny hoe Francisque izay avy aminny teny franka hoe Frank, izay m ...
I Kartago dia tanàna toniziana ao avaratra atsinanani Tonisy renivohitra. Atao hoe Karthago na Carthago izy aminny teny latina fa قرطاج / Qarṭāj kosa aminny teny arabo. Ilay tanàna ponika fahiny izay noravana avy eo namboarinny Romana indray, iza ...
I Siksto IV dia papa teo anelanelanny taona 1471 sy 1484. Teraka taminny taona 1414 izy ary maty taminny taona 1484. Niaro ny zavakanto sy ny asa soratra izy. Nandritra ny fitondrany dia maro ny fifanonganana sy ny fahalovana ara-politika niseho. ...
Ny Sasanida dia fianakavia-mpanjaka persiana nanapaka tao aminny tontolo iraniana taminny taona 224 hatraminny taona 651 nidiranny Miozolmàna tao. Izany vanimpotoana izany no andro volamena teo aminio faritra io, na ara-javakanto izany na ara-pol ...
Ny Empira akemenida na Fanjakana akemenida dia fanjakan-dehibe nanapaka tany Persia taminny taona 550 hatraminny 330 tal. J.K. Ny Akemenida dia atao hoe Hakhāmanišiya aminny teny persiana taloha. Araka ny angano akemenida dia i Hakhāmaniš izay an ...
Ny Empira Antenantenany tany Ejipta dia nanomboka tamin’ny taona 2065 tal. J.K. ka niafara tamin’ ny taona 1781 tal. J.K. ary nahitana fifandimbiasan’ ny dinastia efatra, dia ny dinastia faha-11 hatramin’ ny faha-14. Tokony ho tamin’ ny taona 213 ...
Hadriano dia I Hadriano dia emperora romana faha-14 teraka taminny 24 Janoary 76 ary maty taminny 10 Jolay 138, nanjaka teo anelanelan’ny taona 117 sy 138, izay nametra ny fiitaranny fanjakana romana izay naverina teo amin’ny fetra nofaritan’i Ao ...
Ny Epifania dia fety kristiana ankalazana ny Mesia izay avy sy tonga nofo eto an-tany sady notsidihinireo Magy. Aminny 6 Janoary no tokony hanatanterahana io fety io. Ny Ortodoksa dia mankalaza ny Epifania aminny 6 Janoary ary ny Katolika aminny ...
Ny kroazada na kroazady dia fanafihana mitam-piadiana nataon’ ny Kristiana avy tany Andrefana nanomboka tamin’ ny taona 1095, mba hamonjena ireo Kristiana any Atsinanana, hanafahana ny Tany Masina, izay matetika tanterahina araka ny fangatahan’ n ...
Famoahana fanahy ratsy
Ny famoahana fanahy ratsy na fandroahana fanahy ratsy, dia fanao ao amin ny fivavahana na amin ny fanaovana hatsarana izay anafahana ny olona iray na ny toerana iray amin ny fanahy ratsy mipetraka aminy na mikasa hipetraka aminy. Ny Kristiana dia ...
Papa no anaram-boninahitra iantsoana ny evekan i Roma sady izy koa no lohan ny Eglizy katôlika rômanina maneran-tany. Araka ny fampianarana katôlika dia mifindra amin ny alalan ny fifandimbiasana hatramin i Masindahy Piera izay nahazo izany tamin ...
Ny Kônsily tao Trindentio na Kônsily tao Trento dia kônsily ekiomenikanny Fiangonana katôlika taminny taonjato faha-16 izay natao hamaliana ny Refôrmasiona prôtestanta ka nanamafy ireo tenim-pinoana lehibe. Ny fanapahan-kevitry ny kônsily dia noh ...
I Liberio dia evekani Rôma izay nanomboka nisahana izany asa izany taminny 17 May 352 sady heverina araka ny lovantsofina katolika fa papa faha-36. Tsy fantatra ny fotona nahaterahany. Maty taminny 24 Septambra izy. Taminny fotoana nisianny fahas ...
Ny bazilika Masindahy Piera dia trano fiangonana lehibe indrindra amin ny fivavahana katolika. Ao Vatikàna eo amin ny ilan ny renirano Tibra no iorenany, ary mitodika manoloana ny Toera-malalaka Masindahy Piera. Atao hoe Basilica Sancti Petri izy ...
I Johann Tetzel dia dominikana alemàna teraka tao Pirna any Saksonia taminny taona 1465 ary maty tany taminny taona 1519. Tetzel Hans Diedtz no tena anarany. Nalaza taminny fivarotana endolzansy hamatsiam-bola ny fanamboarana indray ny bazilika M ...
Ny endolzansy na indolzansa na indolzansy dia fanao ao amin ny Fiangonana katôlika rômana izay mamela manontolo na ampahany eo anatrehan Andriamanitra ny sazy tokony ho solon ny fahotana efa nahazo famelana. Izany sazy izany dia atao hoe "fivaloz ...
I Joany na Jaona evanjelista, izany hoe ilay nanoratra evanjely na filazantsara, dia heverina ho ilay "mpianatra tiani Jesoa indrindra", isanireo Apostoly roa ambinny folo, tsy voatonona anarana ao aminny Evanjely araka ani Joany na Filazantsara ...
Joany mpanoratra evanjely sy epistily ary apokalipsy
I Joany na Jaona no anarana iantsoana ny mpanoratra ny boky dimy ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly, dia: ny Taratasy faharoa nosoratani Joany na Epistily faharoa nosoratani Jaona, ny Apokalipsy. ny Taratasy fahatelo nosoratani Joany n ...
Apokalipsin i Joany, na Apokalypsin i Jaona na Apokalipsy, Fanambaràn i Jesoa Kristy na Fanambaràna no iantsoana ny boky kanonika farany ao amin ny Baiboly kristiana, ao amin ny Testamenta Vaovao, izay misy faminaniana momba ny andro farany sy ny ...
Ny Asaramanitra dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny Asaramantsina no eo alohany ary ny Asotry no eo aoriany. Misy koa ny Malagasy manonona hoe Saramanitra, Saramanitsa na Pitsamanitse. Na dia mampiasa ...
Ny Alohotsy dia vintana faharoa ambin ny folo amin ny fanandroana malagasy. Ny Adalo no eo alohany ary ny Alahamady no manaraka azy. Ny tapany antsinana amin ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Vintan olona tsy mahatombin-toerana ny A ...
Ny renivintana na renim-bintana dia ireo vintana aminny fanandroana malagasy izay mifanandrify aminny zoro efatra aminny trano, ka ireto avy izy ireo: ny Alahamady, ny Asorotany, ny Adimizana ary ny Adijady. Ny renivintana iray dia manana zanabin ...
Ny Ondrilahy dia antokon-kintanny zôdiaka izay andalovanny masoandro aminny 19 Avrily hatraminny 14 Mey. Eo anelanelanny antokon-kintanny Hazandrano eo andrefany sy ny anny Ombilahy eo atsinanana izy. Ny Ondrilahy, izay atao hoe Aries aminny teny ...
Ny Ondrilahy no vintana voalohany ao amin ny fanandroana manaraka ny zôdiaka. Ny Hazandrano no eo alohany ary ny Ombilahy no manaraka azy.
Ny Alakarabo no vintana fahavalo amin ny fanandroana malagasy. Ny Adimizana no eo alohany ary ny Alakaosy no manaraka azy. Ny tapany atsimo amin ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy.
Ny Asombola no vintana fahenina amin ny fanandroana malagasy. Ny Alahasaty no eo alohany ary ny Adimizana no manaraka azy. Ny tapany andrefana amin ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy.
Ny Maingoka na Alakarabo no vintana fahavalo amin ny fanandroana manaraka ny zôdiaka. Ny Mizana no eo alohany ary ny Mpitifitra Tsipìka no manaraka azy.
Ny Adimizana no vintana fahafito amin ny fanandroana malagasy manara-bolana. Ny Asombola no eo alohany ary ny Alakarabo no manaraka azy. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Vintana mahery ny Adimizana nefa mety ho tsara na hahaf ...
Mpitifitra Tsipìka (fanandroana)
Ny Mpitifitra Tsipìka na Alakaosy no vintana fahasivy amin ny fanandroana manaraka ny zôdiaka. Ny Maingoka no eo alohany ary ny Tandrok Osy no manaraka azy.
Tetiandro litorjikanny Fiangonana kat ..
Fanomezam-pahasoavana fitonny Fanahy ..